Eco-inoshamwaridzika Chikafu Packing Yave ...
Pfungwa Itsva- Eco Hushamwari Packaging Sezvo nyaya dzezvakatipoteredza dzichiwedzera kukosha kune vatengi, imwe nzvimbo iri kutariswa zvakanyanya ndeye eco-hushamwari kurongedza. More comp...
GTMSMART's Orders Ramba...
Kukura nekukurumidza kwemaodha emakina e thermoforming, imhaka yekuenderera kwedu kutsvaga tekinoroji kuvandudza uye mutengo optimization. GTMSMART yanga ichirerawo mhiri kwemakungwa terminal chiratidzo ...
Mechanical Classification yePla...
Plastic forming inzira yekugadzira mapurasitiki nenzira dzakasiyana siyana (hupfu, chidimbu, mhinduro uye kupararira) kuita zvigadzirwa kana ma blanks ane maumbirwo anodiwa. Muchidimbu, ndiyo nzira yekuumba yep...
Zvinodiwa Uye Kugadziridza Tech...
Kugadziriswa kwemidziyo yepurasitiki ndiyo inonyanya kunyunguduka, kuyerera uye kutonhora zvimedu zverabha muzvigadzirwa zvakapedzwa mushure mekugadzika. Inzira yekudziisa uyezve kutonhora. Izvo ...
Kukosha Kwakazara Otomatiki...
Chinhu chinonyanya kukosha kusimudzira kugadzirwa kweindasitiri yezvigadzirwa zvemapepa ndiko kuchengetedza kwezvakatipoteredza maitiro ezvigadzirwa zvemapepa. Kushandiswa uye kurasa hunhu hwezvigadzirwa zvemapepa iye...
Ndeipi Plastiki Yakajairwa Inoshandiswa Fo ...
Nzira yakanaka kwazvo yekugadzira zvigadzirwa kubva kumapurasitiki ndeye thermoforming muchina, inova maitiro ekudziya hombe yepurasitiki pepa kune yakanyanya kupisa tembiricha uye wozoitonhodza muchimiro chinodiwa ...
Kunzwisisa uye Kusarudzwa kweP ...
Nekuvandudzwa kwehupenyu hwevanhu, kukurumidza kwehupenyu hwehupenyu uye kukurumidza kukura kwekushanyirwa, kudya kune dzimwe nyika kwave kuchiwedzera. Kushandiswa kwe ...
Chii chinonzi Pressure Thermoforming?
Chii chinonzi Pressure Thermoforming? Pressure thermoforming ipurasitiki thermoforming yekugadzira tekinoroji mukati menguva yakafara yeiyi plastiki thermoforming process. Mukumanikidza kugadzira 2 dimen...
Sei uchisarudza kushandisa seedling tray?
Kunyangwe maruva kana miriwo, seedling tray ishanduko yemazuva ano gadheni, inopa vimbiso yekukurumidza uye yakakura vhoriyamu kugadzirwa. Miti mizhinji inotanga sembeu mumbesa-kutanga...
Chii Chinoita Iyo Plastic Cup M...
Chii muchina wekugadzira kapu Muchina wekugadzira kapu yepurasitiki unoraswa ndewe kugadzirwa kwemidziyo yepurasitiki yakasiyana-siyana (makapu ejelly, makapu ekunwa, midziyo yepasuru, nezvimwewo) ine thermopla...
NezvePurasitiki Yemaruva Poti Iyo...
Sei uchisarudza mabhoti epurasitiki? Vanhu vanowanzofarira maplastic planters nekuti akachipa, ari nyore kuwana uye akareruka. Mapoto epurasitiki akareruka, akasimba uye anochinjika. Plastiki...
Dzidza Maitiro eKugadzira Vacuum Mak...
Zvizhinji zvemazuva ano zvinobatika zvatinakirwa zuva rega rega zvinogoneka nekuda kwevacuum kuumba. Zvakadai sekuita zvakasiyana-siyana kugadzira maitiro, kuponesa hupenyu michina yekurapa, kurongedza chikafu, uye mota ...